Jabuutii fi Itoophiyaan sagantaa walfudhata eegaltee jedh Pireezidaantiin Jabuutii - BBC News Afaan Oromoo
Jabuutii fi Itoophiyaan sagantaa walfudhata eegaltee jedh Pireezidaantiin Jabuutii
Goodayyaa suuraa Pireezidaantii Jibutii Ismael Omar Guelleh
Pireezidaantiin Jabuutii Ismaa'el Omaar Guleeh, Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad nama daandii haaraa fudhachuuti jiru fakkaataa jedhan. Gaafa bulchiinsa biyya eegalee, biyyi inni duree dhufe Jabuuti, sagantaa walfudhata qabna jedh.
Itoophiyaa fi Jabuutiin daldala miliyoonaa hedduu waliin qabdi, liqii waliin ergiffane, waliin kaffaluu qabna, ammoo akki nuu tan hojjachuu dandeennun waldhageettii naannootti, Keeniyaa waliin buufata doonii, daandii baaburaa fi daandii xuyyuura misomsuu irratti hojjachuu walii galee jira jedh Obbo Ismaa'el. Soomaliyaa yaada kanaati dhiheessina jedh.
Taaniin, mormitootti mootummaa ta sodaa cunqursaatif biyya alaa jirtu Jabutiitti debi'uuf bilisa jedh. Obbo Isma'el ka BBC Soomaliin dubbate dimokiraasiin jeequmsaan fidu hin mallee jedh.
Daawwannaan Dr Abiy Jabuutiitti taasisan waan haaraa qabaa laata?
Ummati yaada qabu bilisaan ibsuu danda'a, ammoo biraani fedhii waliigalaa qabachuu malee jedh. Yo dimokiraasiin jeequmsa fide, Waaqa kadhachuu qamna jedh. Ammaati nami yaada inni ibseefi hidhan, ka ijjeesan fi ka murtiin irratti dabre hin jiru jedh Obbo Ismael.
Obbo Ismaa'el, nami yoo biyya alaa yaa'u qarqaarsa argachuuf waan hin jire himata jedh, ammoo nama Jabuutiitti debi'uu fedhu harka lamaan dhiheessina jedh.
Haawaasni Oromoo Jabuutii keessaa 'doorsifamaa jirra' jedhan
Geerarsi Oromoof maali?
Itoophiyaan labsii baraarsuu haaraa raggaasiste